အသက်၁၀၀ မနေရ အမှု ၁၀၀ပေွရ လူ့လောကကြီးမှာ ကြုံခဲ့ရပီလေ နှဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ကိုယ့်မိဘ၂ပါးလုံး | D Daily News
Home Local News အသက်၁၀၀ မနေရ အမှု ၁၀၀ပေွရ လူ့လောကကြီးမှာ ကြုံခဲ့ရပီလေ နှဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ကိုယ့်မိဘ၂ပါးလုံး
အသက်၁၀၀ မနေရ အမှု ၁၀၀ပေွရ လူ့လောကကြီးမှာ ကြုံခဲ့ရပီလေ နှဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ကိုယ့်မိဘ၂ပါးလုံး
အသက်၁၀၀ မနေရ အမှု ၁၀၀ပေွရ…လူ့လောကကြီးမှာ…ကြုံခဲ့ရပီလေ နှဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ကိုယ့်မိဘ၂ပါးလုံး..
ပထမစဖြစ်တော့ အငယ်မ ‘နန်း’ ရာသီတုတ်ကွေးပေါ့…အိမ်မှာ ဖေမေတွေ ရှိနေတော့…ကူးကုန်ရော..အဲ့မှာ အမေကတော့ နဂိုကျန်းမာသန်စွမ်းသူမို့…ဆိုးရွား သက်ရှူကျပ်လောက်အောင်မခံစားလိုက်ရပေမဲ့…ဆီးချိုရော နှလုံးရောဂါပါ ရှိနေတဲ့ အဖေ ကတော့…ဖျားပီဆိုထဲက ဆေးခန်းပြဆေးထိုးခဲ့ကြတာပဲ…ပေမဲ့ လုံးဝသက်မသာလာခဲ့ဘူး
ဆေးပတ်လည်ရင်ကောင်းလာမယ်အထင်နဲ့ ဆေးခန်းကပေးတဲ့ဆေးတေသောက်ရင်း…၅ရက်လောက်ဘုန်းဘုန်းလဲခဲ့ကြတဲ့ချိန်…ပင်လုံဆေးရုံကိုသွားပြချိန်မှာတော့…Oxygen ကျနေပီ…အဖျား101…ရင်ဘက်ဓာတ်မှန်အဖြေ မကောင်းဘူး…ဆရာဝန်တွေက အဲ့မှာ လူနာကို မကြည့်တော့ ပါဘူး…ဆေးရုံလွှဲဖို့လုပ်ကြပါပီ…ကိုယ်တေညီမ၄ယောက် ကမ္ဘာပျက်ပီလေ..
ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာချလိုက်တော့တယ် ပန်းလှိုင်ဆေးရုံ ပို့မယ် နေရာလွတ်မရရင် အိမ်မှာပဲ ငါရအောင်လုပ်မယ်…ဆိုပီး..
ခုချိန်မှာ..အတော်များများကြုံတွေ့နေကြရပီဆိုတာ သိလိုက်ရတော့…ရင်နဲ့အမျှကိုယ်ချင်းစာ ခံစားရတယ်…အဓိက လိုအပ်တာကတော့…
Vitamin. C (ပုံမှာပြထားတဲ့ဆေးဗူးလိမ္မော်ရောင်)
အားရှိစေမဲ့ အားဆေး/Ensure (ဆီးချိုသမားဆို.Glucerna)/BRANDSကြက်ပေါင်း..
အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာ+ကြက်ပြုတ်/စွပ်ပြုတ်အရည်/ဓာတ်ဆား/ကြက်ဥပြုတ်အကာကျက်…အသက်ရှူမဝဖဲအရမ်းရှူရခက် ကျပ်နေရင်…Ventolin. 250mcg or 100mcg ရှူသွင်းပေး…
Oxygen. ..ပေးထားရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ…
Oxygen နဲ့ နှလုံး ကို တိုင်းပေးတဲ့စက်လေးလဲ လိုအပ်ပါတယ်….
ရေနွေးလေးနဲ့ ဆားရည်ငုံပီး..ပလုပ်ခဏခဏကျင်းပေးပါ….ထက်လင်းရင်လူးဆေးကို ရင်ဘက်နဲ့ကျော အဆုပ်ရှိတဲ့နေရာတေ..ရွှဲရွှဲလေးလူးပီး..အဝတ်လေးပတ်ပေးထားပါ…လူနာထိတွေ့ကိုင်တွယ်ထားသမျှကို..သေချာဆပ်ပြာ/Dettol/Hand Gel/Disinfectant Spray ဖြန်းပါ…
ကိုယ့်အိမ်မှာဖဲ စနစ်တကျ တယောက်ကနေတယောက်မကူးအောင် အထူးသတိကပ် သေချာ…
ပိုးသက်ပီး…အာဟာရပြည့်ဝအောင် စား…အိပ်..ဆေးသောက်…ပီး…စိတ်ဓာတ်ရော ခွန်အားပါ…ပြည့်ဝလာရင်…လုံးဝပျောက်ကင်းသွားမှာမို့.
Previous articleကိုဗစ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူတစ်ဦး ပြောပြတဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ကိုဗစ်
Next articleကလေးတွင် ညက ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် မ ​ေ သသင့်ဘဲ ​ေ သ ဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ အသက် ၆၉ နှစ်အရွယ်အဘိုး